यिनै हुन् २६ वर्षीय भतिज लोकबहादुर कार्की जसले ‘हेपाई’ सहन नसक्दा गरे कहाली लाग्दो ह त्या ! – Hamro Nepali Samachar
Home/ समाचार/यिनै हुन् २६ वर्षीय भतिज लोकबहादुर कार्की जसले ‘हेपाई’ सहन नसक्दा गरे कहाली लाग्दो ह त्या !
संखुवासभा मादी नगरपालिका-१ उम्लिङमा एकै परिवारका छ जनाको ह’त्या आरोपमा नाता पर्ने भतिजा उम्लिङकै २६ वर्षीय लोकबहादुर कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
उनलाई प्रहरीले शुक्रबार पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। लोकबहादुरको घर नजिकैबाट घटनामा प्रयोग भएको ह’थौडा र र’ग’तले ल त पतिएको कपडा बराबद भएको प्रहरीले जनाएको छ।
मृ त कको घर र लोकबहादुरको घर डेढ सय मिटरको दुरीमा छ। प्रहरी ले पक्राउ परेका व्यक्तिबारे आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिने बताएको छ। प्रहरीका अनुसार कार्की केही समय पहिले वैदेशिक रोजगारी बाट फर्किएका थिए। ‘हामी अनुसन्धानको निष्कर्षमा पुगेका छौं, घटना बारे विस्तृत रुपमा भोलि पत्रकार सम्मेलनमा भन्नेछौं,’ दाहालले घटना के कसरी र के कारणले भएको भन्नेबारे पनि प्रहरीले सार्वजनिक गर्ने उनले बताए।
शव फरक–फरक चार स्थानमा फेला परेको थियो । संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय धरानका एसपी भीम दाहाल, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो बाट खटिएका डिएसपी रुगम कुँवर र संखुवासभाका डिएसपी लालध्वज सुवेदी सहितका अनुसन्धान अधिकृतहरूले ह’त्या अनुसन्धान गरेका थिए ।
ह’त्या ग’रि’एका तेजबहादुरले ‘हेपेका कारण’ आफुले आवेगमा ह’त्या गरेको आरोपी लोकबहादुरले प्रहरीलाई बताएका छन् । तेज बहादुरका दुईभाई छोरा विदेशमा छन् । लोकबहादुरलाई आफु विदेश जान नसकेकोमा ‘हिनतावोध’ थियो ।
स्थानीयहरुका अनुसार तेजबहादुरमा अरुलाई हे’प्ने ‘प्रवृत्ति’ थियो । तेजबहादुरको प्रवृत्ति लोकबहादुरलाई मन परेको थिएन । ‘हेपाई’ खप्न नसकेर लोकबहादुरले तेजबहादुर परिवारको विनाश गरेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् ।
पारिवारीक दुश्मनीका कारण घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृतकको घरमा रहेको धन सम्पत्ति सुरक्षित रहेको हुनाले आर्थिक कारण घटना नभएको निष्कर्ष प्रहरीको छ। घटना एकाबिहानै भएको पनि अनुसन्धानमा खुलेको छ।
प्रहरीका अनुसार घटना साढे ५ देखि ६ बजेको बीचमा भएको देखिएको छ। कार्कीले सुरूमा तेजबहादुरलाई प्रहार गरेको र त्यसपछि क्रमश: पालैपालो अरूलाई प्रहार गरेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ।